Bagqugquzelwe ngothando lwezibalo ngeValentine's Day
UBEZE abhidise kanjena uDkt Msizi Mkhize ngesikhathi echazela abafundi baseNanda Comprehensive High ngokubaluleka kokuthanda isifundo seMathematics, izolo Isithombe: DOCTOR NGCOBO
Khulekani Maseko | February 15, 2017
LUGUJWE ngendlela ehlukile usuku lwezithandani esikoleni samabanga aphakeme esiseNanda, izolo.
Abafundi baseNanda Comprehensive High, bachithe amahora amabili begqugquzelwa ngothando lwezibalo, njengoba lolu suku belubizwa ngeLove Mathematics Day kulesi sikole.
UDkt Msizi Mkhize ofundisa izifundo ze-Accounting eNyuvesi yaKwaZulu-Natal, uvakashele lesi sikole ukuyocobelelana nabafundi ngezindlela ezilula ezingenza bathande iMaths. “IMathematics yisona sifundo esibalulekile ngoba sivula iminyango eminingi ezikhungweni zemfundo ephakeme. ISouth Africa isilele emuva kulesi sifundo, ngakho ngibone kuwumqondo omuhle ukuthi sisebenzise lolu suku olwaziwa ngolwezithandani ukugqugquzela abafundi ukuthi bathande iMaths.”
Abafundi bebebukeka beyithakasela indlela uMkhize abeyamanisa ngayo izinto ezijwayelekile nezibalo kugcine sekunika umqondo ohlukile, esebenzisa amatemu alesi sifundo. Ubebuye acaphune nezigatshana eBhayibhelini azitolike ngolimi olusetshenziswa kwiMaths abuye abhidise, obekunanelwa ngelikhulu ihlombe labafundi nothisha.
“Ngicela othisha bafundise lesi sifundo ngendlela ezotshala uthando enhliziyweni yomfundi. Ukushintsha nje ukukhuluma okujwayelekile ukubize ngamatemu alesi sifundo kwenza umfundi akwazi ukusheshe abambe futhi asijabulele lesi sifundo,” kusho uMkhize.
Uthishanhloko walesi sikole, uMnuz Thulile Chauca, uthe lolu suku seluzohlale lugujwa ngale ndlela kulesi sikole minyaka yonke. “Ngonyaka ozayo sifisa ukujoyinwa nangabafundi bakwezinye izikole ukuze sigqugquzele izingane ukuthi zigubhe okuqondene nazo kunokuthi zisebenzise lolu suku ukunaka izinto ezingakafiki esigabeni sazo. Siyathemba ukuthi izinto ezinjengalezi zizosilekelela kakhulu kwazise ngonyaka odlule sithole * -34% kuphela kulesi sifundo ku-matric."
UNksz Thembelihle Thusi (17) owenza uGrade 12 kulesi sikole uthe kubajabulisile ukugubha lolu suku ngale ndlela wathi kuzobasiza ekukhuliseni uthando lwalesi sifundo.